Sarimihetsika maneho ny zava-misy: ny “Trafic”, mamaky bantsilana ny halatra taova | NewsMada
Sarimihetsika maneho ny zava-misy: ny “Trafic”, mamaky bantsilana ny halatra taova
Ny halatra kely mora tratra fa ny halatra goavana, toa tsy misy fiafarany… Ny fahatsapana izany tranga mateti-piseho izany no nahatonga ny mpanatontosa hamokatra ny “Trafic”, miresaka ny halatra taova.
Tena misy ny halatra taova… Manamafy ary mamaky bantsilana izany, saingy amin’ny alalan’ny sarimihetsika, i Ndriana Ranto. Izy no nanatontosa ny “Trafic”, sarimihetsika maneho ity tranga mampihoron-koditra maneran-tany ity.
“Mitarika olana lehibe eo anivon’ny firenena ny halatra taova. Tsy ny ankizy ihany fa iharan’io koa ny olon-dehibe. Nahita ny tena fisehon’izany aho tamin’ny nianatra tany ivelany, ka amin’ny maha mpanabe, mahatsiaro manana adidy amin’ny vahoaka Malagasy, mampahafantatra fa tena misy marina ny halatra taova”, hoy ny nambaran’ity talen’ny For Twelve School, izay misahana ny fanatontosana ity sarimihetsika ity.
Tanora manam-pahaizana amin’ny sokajy maro no niezaka nandrafitra ny sarimihetsika. Herintaona no namolavolana izany, ka izao vao vita ary hivoaka ny 16 aogositra. Tsikaritra ao anatin’ny sarimihetsika ny fandraisana anjaran’i Poopy, mpanakanto fantatra teo amin’ny mozika, saingy tsy nampoizin’ny maro hilalao sarimihetsika. Hitana ny toeran’ny renim-pianakaviana iray izay very zanaka izy.
Maharitra 102 minitra ny “Trafic”, hivoaka amin’ny endriny DVD izany, amin’ny alakamisy ho avy izao, manerana ny Nosy. Ny Yeladim Production no namokatra sy hisahana ny fanapariahana azy.